नेपालको नयाँ नक्साबारे भारतीय मिडियाले के लेखे ?
Homeराष्ट्रिय खबरनेपालको नयाँ नक्साबारे भारतीय मिडियाले के लेखे ?
६ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृति दिएसँगै देशभित्र राष्ट्रवादको ठूलै तरंग उब्जेको छ । देशका मिडियाहरुमा महत्वका साथ समाचार प्रकाशन–प्रशारण भइरहेका छन् ।
एउटा देशले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । त्यसैले यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुको पनि ध्यान तान्ने अपेक्षा थियो । तर, भारतबाहेक विश्वका प्रमुख मिडियाले यो समाचारलाई खासै स्थान दिएका छैनन् ।
सीएनएन, बीबीसी, अलजजिराजस्ता विश्वभर हेरिने सञ्चार माध्यममा नेपालको नयाँ नक्सा अटाएको छैन ।
आफ्नै देश जोडिएको विषय भएकाले भारतीय सञ्चार माध्यममा चाहिँ थोरबहुत समाचार आइरहेका छन् । ती समाचारमा तथ्यपरक सूचनाभन्दा आक्रोश बढी देखिन्छ । यस विषयमा भारतको सरकार अहिलेसम्म मौन छ र भारतीय मिडियाले पनि सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
जिन्यूजले नेपालको मन्त्रीपरिषदले विवादास्पद नक्सा स्वीकृत गरेको र भारतीय भूभागलाई आफ्नो दावी गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । नयाँ दिल्लीको डेटलाइनमा लेखिएको समाचारअनुसार नेपाल सरकारको यो कदमलाई नयाँ दिल्लीले चीनको बढ्दो भूमिकाको नतिजाका रुपमा हेरेको छ ।
टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित समाचारमा चाहिँ लिपुलेकलाई ‘विवादित भूमि’ भनिएको छ । समाचारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य गणेश साहलाई उद्धृत गरिएको छ । उनले सरकारको कदमले कोरोनाको लडाईंका बीच दुई देशबीच तनाव बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शाहले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले यो विषयलाई राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ ।’
टाइम्स अफ इन्डियाले नेपालद्वारा कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापना गरेको समाचार पनि दिएको छ ।
बीबीसीको हिन्दी संस्करणमा चाहिँ नेपाल–भारत सीमा विवादबारे काठमाडौंकै डेटलाइनबाट लगातार समाचार प्रकाशन भइरहेको छ । मंगलबार प्रकाशित समाचारमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई ‘ल्यान्डमार्क फैसला’ को संज्ञा दिएको छ । यसअघि ‘के भारतसँग नेपाल सीमा विवादबारे कुरा गर्न चाहँदैन ?’ शीर्षकमा बीबीसी हिन्दीले एक आलेख प्रकाशित गरेको थियो ।
‘हिन्दूस्तान टाइम्स’, ‘द वायर’ लगायतले नेपालको मन्त्रिपरिषदले नयाँ नक्सा पारित गरेको समाचारलाई सामान्यरुपमा कभरेल गरेका छन् । तर, कुनै पनि भारतीय मिडियाले यस विषयमा भारतीय पक्षको भनाइ समावेश गरेका छैनन् ।
भारतका मिडियाहरुले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारकै लाइन बोक्ने गर्छन् । सरकार जति ‘राष्ट्रवादी’ छ, त्यो भन्दा उग्रराष्ट्रवादी बन्न खोज्छन् त्यहाँका मिडिया । खास गरी पास्कितान र चीनसँग सम्वन्धित समाचारहरु प्रशासन गर्दा भारतीय मिडियाले संयम र सन्तुलन दुवै गुमाउने गरेको पाइन्छ ।
सामान्यतया नेपालसँग सम्वन्धित समाचार भारतीय मिडियाले उति महत्व दिँदैनन् । जस्तो कि, नेपाल र भारतबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका समाचारहरु नेपाली मिडियामा उच्च कभरेज पाइरहँदा भारतीय मिडियामा चाहिँ टर्च बालेर खोज्नुपर्छ । एकाध भारतीय सञ्चारमाध्यमले मात्रै नेपालमा आफ्ना स्थाई संवाददाता राखेका छन् ।
नेपालमा दरबार ह त्याकाण्ड, भु कम्पजस्ता ठूला विप्लवहरु हुँदा चाहिँ नेपालमा भारतीय मिडियाकर्मी नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका थिए । तर, उनीहरुले समाचारभन्दा भ्रम बढी फैलाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । अहिलेको विवादमा भारत सरकारले बोल्न बाँकी रहेकाले त्यहाँका मिडिया अलमलमा देखिएका छन् ।-अनलाइन खबर
२० वर्षीय युवकमा कोरोना पुष्टि भएपछि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अ,निश्चितकालीन बन्द
थप २७ जनामा कोरोना सं,क्रमण, सं,क्रमितको संख्या ४ सय २ पुग्यो
buy tadalafil 20mg price – purchase tadalafil tadalafil buy
buy propecia online with prescription – http://finasteridepls.com/ finasteride and minoxidil
where do i buy propecia – propecia and beard growth how much does propecia cost per month
generic propecia – finasteride results after2years does propecia affect bodybuilding
Uykhqz – http://virviaga.com/ viagra jelly
Jwrnpo – cheap stromectol Qoqqpn temlgl
Oiheht – generique du tadalafil Sffpwb pbrqkh